ल्याव हेर्न मन्त्रीहरु आए, अनुमति आएन – Loktantra Post Loktantra Post
ल्याव हेर्न मन्त्रीहरु आए, अनुमति आएन
३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १७:१७
झापा, ३० साउन । प्रदेश नं. १ मा कोभिड १९ को संक्रमण डरलाग्दो गतिमा बढिरहेको छ । कोभिड अस्पतालहरुमा संक्रमितलाई राख्ने ठाउँ नभएकाले सयौं विरामीहरु हाल होम आइसोलेसनमा बस्न बाध्य छन् ।
समस्या यतिमै सीमित छैन । केही दिन अघि विर्तामोड र भद्रपुरका सबै ठूला अस्पतालले पीसीआर टेस्ट नगरी विरामी भर्ना नलिने भनेपछि डुलाउँदा डुलाउँदै मेचीनगर र कनकाईका दुई बालकको उपचार अभावमा ज्यान गयो ।
परिस्थिति अझ गम्भीर कहाँनेर छ भने स्वाव संकलन भएको चारदेखि पाँच दिनपछि मात्र पीसीआर टेस्टको रिपोर्ट आउने गरेको छ । कतिपय अरु नै विरामीको उपचार नपाएर मृत्यु भइसकेपछि मात्र कोरोनाको रिपोर्ट आएका घटना पनि छन् ।
यस्तो भयावह समस्या हुँदाहुँदै दुःखको कुरा के हो भने झापाको कनकाईमा जनस्तरमा चन्दा उठाएर स्थापना गरिएको पीसीआर ल्याव भने सरकारले सञ्चालनमा लामो समयदेखि आनाकानी गरिरहेको छ ।
छिटो पीसीआर रिपोर्ट आओस् भनेर चाहने हो भने कनकाईको ल्याव पनि छिटो सञ्चालनमा आउनु पर्ने हो । तर सत्तामा बसेकाहरुले यो आवश्यकतालाई बुझेनन् ।
एकका लागि एक अभियानले एक करोड भन्दा बढी सहयोग संकलन गरेर पीसीआर किन्यो र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिरहेको छ । मन्त्रीहरु एकपछि अर्को निरीक्षणमा आउँछन् र भन्छन् –‘यति राम्रो ल्याव सञ्चालनमा आउनै पर्छ ।’
सबैभन्दा पहिला सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले कनकाईमै आएर जनस्तरको पीसीआर ल्याव सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै सहयोगको घोषणा गरे ।
त्यसपछि थपिए आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्की । उनले एटा भर्चुअल छलफलमा बोल्दै कानूनी अड्चन भए फुकाएर पनि जनस्तरको ल्याव सञ्चालनमा ल्याउन आफु तयार रहेको बताए ।
शुक्रवार विहान ११ बजे मुख्यमन्त्री शेरधन राई नै ल्याव निरीक्षणमा आए । उनले पनि उही भाषा र आश्वासन दोहोर्याए । जनस्तरको ल्याव सञ्चालनमा ल्याउन आफु प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्रीको भनाई थियो ।
असारमै स्थापना भएको कनकाईको ल्याव साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइसकेको थियो । तर अहिलेसम्म सरकारी अलमलका कारण सञ्चालन हुन सकेको छैन । सबै मन्त्री, सबैजसो सांसद् र सबैजसो दलका नेता सो ल्याव छिटो सञ्चालनमा आओस् भन्ने बताउँछन् । आखिर किन सञ्चालनमा आउँदैन ? के हो बाधक ? कसले रोकिरहेको छ ? अब यो प्रश्नको जवाफ खोज्नै पर्ने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री भन्छन् -‘एकदुई दिनमै अनुमति दिलाउँछु’
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले एकका लागि एक अभियानले झापाको कनकाईमा पिसिआर परीक्षण ल्याब स्थापना गरेकोमा प्रशंसा गरेका छन् ।
कनकाईस्थित समर्पण भवनमा स्थापना भइसकेको ल्याबको शुक्रवार विहान ११ बजे स्थलगत निरीक्षणपछि मुख्यमन्त्री राईले ल्याब आफूले सोचेभन्दा धेरै नै व्यवस्थित रहेको पनि बताए । ‘मैले धेरैवटा ल्याब हेरेको छु‘, मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘तर, नागरिकले स्थापना गरेको यो ल्याब धेरै नै उत्कृष्ट र व्यवस्थित रहेछ ।’
निरीक्षणपछि भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री राईले आजै विराटनगर पुग्नेबित्तिकै सबैभन्दा पहिला यसका बारेमा खोजीनीति गर्ने र एकदुईभित्रमा अनुमति प्राप्त प्रदान गरेर यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाउने कुराको वचन दिएका छन् ।